कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुनमन्त्री बन्दीका गफ धेरै, काम थोरै | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुनमन्त्री बन्दीका गफ धेरै, काम थोरै
अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीका हकमा यी उखान चरितार्थ
२०७९ असार ५, आईतवार १७:०५:००
काठमाडौँ । नेपालीमा केही उखान छन्– नमच्चिने पिङका सय झट्का । रित्तो भाँडो बढी बज्छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीका हकमा यी उखान चरितार्थ भइरहेका छन् ।
गर्नुपर्ने काम एउटा पनि गरेका छैनन् । अब उनीहरुसँग गर्ने समय पनि छैन । त्यसैले उनीहरु कामभन्दा बढी हल्ला गरिरहेका छन् । ठूला क्रान्तिकारी कुरा गरेर धेरैको ध्यान आफूतिर तान्ने र भोलि काम गर्न नसके अर्काको थाप्लोमा हालेर उम्किने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ ।
उनीहरु भाषण जे गरिरहेका छन्, व्यवहार ठीक उल्टो छ । यसकारण पनि उनीहरू जे भनिरहेका छन्, त्यो गर्नका लागि होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बरू जुन हर्कत भित्रभित्रै गरिरहेका छन्, तिनको ढाकछोप गर्न पनि बाहिर धेरै मच्चिएका हुन सक्छन् भन्ने देखिन्छ ।
अहिले कार्की र बन्दीका भाषणको विषयवस्तु र बान्की मिलिरहेको छ । उनीहरू जहाँ पुग्यो त्यहीँ भनिरहेका छन्– न्यायाधीशको नियुक्ति खल्तीबाट भइरहेको छ । राजनीतिक दलका ढोकाढोका चहारिएको छ । अर्थात् सिंगो न्यायपालिका र कार्यक्षेत्रमा खटिएका न्यायाधीशहरूमाथि हिलो छ्यापेर आफू चोखो देखिन खोजिरहेका छन् ।
केही दिनअघि संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बन्दीले जुन भाषामा न्यायाधीश नियुक्तिबारे टिप्पणी गरेका थिए, त्यसो अर्को दिन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यही शैलीमा त्यही विम्ब प्रयोग गरे र भने– खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश बनाइयो । यो अवस्था फेर्नुपर्छ । उनले यसो भनिरहँदा आफ्नो विगत बिर्सिए । विगतको के कुरा भयो र ? हिजो उनले चोलेन्द्रशमशेर राणासँगै मिलेर खल्तीबाटै नाम निकालेर आफ्ना निकटस्थहरुलाई न्यायाधीश बनाइसकेका छन् । के उनी अहिले ती न्यायायाधीशलाई घर फर्काउन सक्छन् ? आफूले गर्नुसम्म भ्रष्टाचार गरेर भोलि आउनेका हात बाँधेर जान्छु भन्ने शैलीमा कार्की प्रकट भएका छन् ।
अझ उनका कतिपय गतिविधि अहिले पनि चोलेन्द्रपथतिरै अग्रसर छन् । चोलेन्द्रको बाटो हिँडेर न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्छु र न्यायिक बेथिति अन्त्य गर्छु भनेर गफ नदिए हुन्छ । अब कार्कीले चाहेर पनि एक सिन्को भाँचिनेवाला छैन । किनभने अब उनका पनि दिनगन्ती सुरु भइसकेका छन् । अबको ३ महिनामा उनी अनिवार्य अवकाश पाएर घर जाँदै छन् । उनलाई अदालतमा टेर्न छाडिसकिएको छ ।
यदि उनमा न्यायिक शुद्धीकरणको हुटहुटी थियो भने नेतृत्व पाएकै दिनदेखि चोलेन्द्रका निर्णय उल्टाउन थाल्नुपर्थ्यो । सबभन्दा पहिला चोलेन्द्रलाई बालुवाटारबाट निकालेर घर पठाउनुपर्थ्यो । चोलेन्द्रले गरेका सरुवा र काज बदर गर्नुपर्थ्यो । चोलेन्द्रले पूर्वाग्रही ढंगले गरेका कारवाही उल्टाउन सक्नुपर्थ्यो । अनि चोलेन्द्रको गिरोहमा संलग्न भएका न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि छानबिन थालिहाल्नुपर्थ्यो । न्यायाधीशका जुनजुन पद जहाँ खाली हुन्छन्, तल्लो तहबाट वरिष्ठताका आधारमा तानिहाल्नुपर्थ्यो । यति हुनेबित्तिकै चोलेन्द्रको घेरा तोडिन्थ्यो । चोलेन्द्रपथ पनि उल्टिन्थ्यो । चोलेन्द्रसँग एउटै थालीमा खाएर, चोलेन्द्रकै बाटो हिँडेर चोलेन्द्रलाई नर्क पुर्‍याउँछु र आफू स्वर्ग पुग्छु भन्नु ढोँगी र पाखण्डीपना मात्र हो ।
मन्त्री बन्दीले पनि आफ्नो हैसियत नापेर बोल्नुपर्ने हो । तर सबै सर्वाधिकार सम्पन्न आफै हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनको बोलीमा कुनै तथ्य, तथ्यांक र अध्ययन छैन । केवल पूर्वाग्रह, सतहीपना र ढोँगीपना छ । कुनै विनयशीलता पनि छैन । जे हो मै हो भन्ने शैलीमा उनी प्रस्तुत भइरहेका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदका सामु एक गैरसांसद टिके मन्त्रीले हुकुमी शैलीमा दिएको भाषणमा कत्ति पनि संगति थिएन । त्यसले उनको खोक्रोपना मात्र बताइरहेको थियो । जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तिले देशभरका न्यायाधीशको निष्ठा र योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरुको व्यक्तित्व र छविको अवमूल्यन गर्दा बन्दीको कद बढ्यो कि घट्यो ? हरेक विद्वान कानुन व्यवसायी र न्यायकर्मीले उनको हैसियत मापन गरिसकेका छन् ।
हो जिल्ला अदालतका केही सिटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै मापदण्ड र कार्यविधि छैन । कुनै पारदर्शी प्रक्रिया पनि अपनाइँदैन । नेपालको संविधान र न्याय परिषद ऐनले केही मापदण्ड तोकिदिएको भए पनि त्यसको खासै अर्थ छैन । न्याय परिषदका पदाधिकारीले खाली सिटको भागबण्डा गर्छन्, अनि खल्तीबाट नाम निकालेर आ-आफ्ना कोटा भर्छन् । यो यथार्थ हो । तर के यो अवस्था बन्दीले उल्टाउन सक्छन् ? सक्ने हो भने किन अहिलेसम्म नसकेको ? किन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तोक्न ढिला गरेको ? वरिष्ठतामा अगाडि भएका दुइजनालाइ सर्वोच्च ल्याउन किन महाभारत गर्नुपर्ने ? वरिष्ठहरूमध्येबाटै मुख्य न्यायाधीश बनाउन छाडेर जब निर्देशिकाको नाटक गर्न थालियो, त्यसबाट बुझे हुन्छ कि उच्च अदालतका निश्चित न्यायाधीशलाइ घर पठाउने दिनको पर्खाइमा न्याय परिषदका पदाधिकारी छन् । उनीहरूले चाहेका व्यक्तिको नाम अगाडि आएपछि मात्र निर्णय गर्नेछन् ।
नत्र भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दाको खात लागिसक्दा पनि किन विशेष पहलकदमी लिन नसकेको ? के एउटा निर्देशिका बनाउन महिनौँ लाग्छ र ? बारले सुझाव दिएन भन्दैमा न्यायपालिकाको गति रोकिराख्नुपर्छ र ? आफ्नो नालायकी र निहित स्वार्थलाई आदर्शको बर्कोले ढाकछोप गर्न उनीहरु अनेकन तर्क र बहाना झिकिरहेका छन् । गोपाल पराजुलीदेखि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउन पनि विगतमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले यस्तै तानाबाना गरेका थिए । अहिले त्यही इतिहास दोहोर्‍याउन खोजिँदै छ । अहिलेलाई यत्ति भन्न सकिन्छ कि कार्की र बन्दीले षड्यन्त्र गर्दागर्दै उनीहरुको पद नखुस्कियोस् ।